အ မိမြေပြန်ရောက် မှ ဘာလို့ များ ကိုယ့်ဘဝ ကို အရှုံးပေး လိုက်ရတာ လဲ ညီလေး ရယ် - MZB FAMILY
အ မိမြေပြန်ရောက် မှ ဘာလို့ များ ကိုယ့်ဘဝ ကို အရှုံးပေး လိုက်ရတာ လဲ ညီလေး ရယ်
ထိုင်း.မြန်မာ အမှတ်၂ တံတား မြဝတီဘက်ခြမ်း BCF ဇုန် ၌ ယနေ့ ဇူလိုင် ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အချိန်ခန့်ကထိုင်းနိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသည့် ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် အင်းနို့ သိပ္ပံရွာနေ စောဌေးစန်း (၂၆)နှစ်သည် လည်ပင်းအား ဓားဖြင့်လှီးလျက် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လို အကြောင်းတရား…ဘယ်လို စိတ်ခံစားမှု နဲ့များ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ပြန်ရောက်ပြီးခါမှ လည်ပင်းကို ဓားဖြင့်လှီး၍ suicide. လုပ်လိုက်ရတာလဲပေါ့….? အသက်က အခုမှ ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးသည်မို့ အရွယ်ကောင်းလေးပါ…။
ပြည်တော်ပြန် ခရီးကို မျှော်နေကြမယ့် နောက်ပိုင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ပူဆွေးမှု အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမလဲ..? သွားသူက သွားပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကျန်နေသူတွေက သို့လော သို့လောဖြင့် တွေးစရာ လေးတွေ ဖြစ်ကျန် ခဲ့မယ်လို့ ထင်မိပါရဲ့…။
အ မိမွပွေနျရောကျ မှ ဘာလို့ မြား ကိုယျ့ဘဝ ကို အရှုံးပေး လိုကျရတာ လဲ ညီလေး ရယျ
ထိုငျး.မွနျမာ အမှတျ၂ တံတား မွဝတီဘကျခွမျး BCF ဇုနျ ၌ ယနေ့ ဇူလိုငျ ၄ ရကျ မှနျးလှဲ ၁ နာရီ အခြိနျခနျ့ကထိုငျးနိုငျငံ မှ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလာသညျ့ ကရငျပွညျနယျ လှိုငျးဘှဲ့မွို့နယျ အငျးနို့ သိပ်ပံရှာနေ စောဌေးစနျး (၂၆)နှဈသညျ လညျပငျးအား ဓားဖွငျ့လှီးလကျြ သဆေုံးမှု ဖွဈပှား ခဲ့ပါတယျ။
ဘယျလို အကွောငျးတရား…ဘယျလို စိတျခံစားမှု နဲ့မြား ကိုယျ့နိုငျငံထဲ ပွနျရောကျပွီးခါမှ လညျပငျးကို ဓားဖွငျ့လှီး၍ suicide. လုပျလိုကျရတာလဲပေါ့….? အသကျက အခုမှ ၂၆ နှဈသာ ရှိသေးသညျမို့ အရှယျကောငျးလေးပါ…။
ပွညျတျောပွနျ ခရီးကို မြှျောနကွေမယျ့ နောကျပိုငျး ကနျြရဈခဲ့တဲ့ မိသားစုဝငျတှရေဲ့ စိတျခံစားမှုနဲ့ ပူဆှေးမှု အတိုငျးအတာ ဘယျလောကျမြား ရှိနမေလဲ..? သှားသူက သှားပွီးဖွဈပမေယျ့ ကနျြနသေူတှကေ သို့လော သို့လောဖွငျ့ တှေးစရာ လေးတှေ ဖွဈကနျြ ခဲ့မယျလို့ ထငျမိပါရဲ့…။
Previous Article ဖားကန့်မှာ မြေပြိုကျတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ငိုခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့” ချစ်သုဝေ”
Next Article လူကြားထဲ မှာ မဖွယ်မရာလာ လုပ် တဲ့ နှာဗူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိ ဒူးထောက်တောင်းပန်ခိုင်းတဲ့ မိန်းခလေး (ရုပ်သံ)